Fadlan ka caawi arrimaha FMC :-)
Fadlan ka caawi arrimaha FMC :-) Bilood 5 3 todobaad ka hor #1598
Akhriso "FMC Readme.txt" oo raac talaabo kasta. Ku darso labada "isugeyn daaqad cusub" iyo "badala daaqadaha GPS-ka jira" ee talaabada ku jirta faylka FMC. Habka dib-u-habeynta midkoodna iima siin karo soo-saarka FMC. Waxaan ku arkaa furaha "737 Classic" daaqada iyo koodhka loogu talagalay FMC, laakiin ha ku arkin badhan ka aragtida gudiga F10 / 2D. Waxaan isku dayay in laynka laydhka FMC qeybta qeybta koodhadhka GPS, laakiin wali, waxba kama soo baxaan. Runtii aad baan u jeclaan lahaa qof ila taliya meesha aan qalad ku socdo. Ma laga yaabaa in shaashadda shaashadda faylkaaga qoraalka tafatirka aniga la barbardhigo? Thanks .....
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.154